Emiliano Martinez Oo Shaaciyey Sidii Uu Noqday Dareenka
Emiliano Martinez ayaa uga mahad celiyey Mikel Arteta iyo kooxda Arsenal sidii ay ugu ogolaadeen inuu ka tago oo uu u wareego Aston Villa, kaddib markii uu u gudbiyey codsi uu ku dalbaday in loo ogolaado inuu ka baxo Emirates.
Liverpool-bound Thiago: leaves Bayern Munich most …
Thiago Alcantara Oo Shaaciyey Sababtii Uu Ku Doortay
Goolhayaha reer Argentina ayaa u sheegay naadigiisa hore inuu doonayo koox uu ka helayo boos joogto ah, waqtiganna aanay taasi suurtogal uga ahayn Arsenal oo uu joogo Bernd Leno oo dookha koowaad ah.
Emiliano Martinez ayaa Arsenal kula guuleystay labada koob ee FA Cup iyo Community Shield muddadii uu dhaawaca ku maqnaa Bernd Leno, waxaanu sameeyey bandhig cajiib ahaa oo keenay inuu ka fikiro mustaqbalkiisa oo aanu kusii jirin kaydka, isaga oo is tusiyey inuu xataa u qalmo inuu Leno ka qaado booska koowaad, haddii kalena uu iskaga tago kooxda.
Aston Villa ayaa Martinez kula wareegtay £20 milyan oo Gini kaddib markii uu isagu kala shaqeeyey sidii ay adeeggiisa u heli lahaayeen, isla markaana uu codsi u gudbiyey Mikel Arteta iyo kooxdaba.
Martinez oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyey sidii uu dareenka Arteta noqday markii uu ka dalbaday in loo ogolaado inuu ka tago kooxda, waxaanu yidhi: “Waxaan kula guuleystay Arsenal saddex FA Cup iyo saddex Community Shield xili ciyaareedkii u dambeeyey ka hor, laakiin dhab ahaantii kooxda kamaan mid ahayn oo xataa hal daqiiqadood la ima siinin.
“Sidaa darteed, marna ma dareemin inaan ku guuleystay, balse waxa aan ka mid ahaa kooxda aniga oo dareemaya in aanu koobkaygii ahayn. Laakiin markii aan ku guuleystay koobabkan, waxaan lahaa ‘waa koobabkaygii’. Arsenal waxay isku dayday inaan sii joogo, waxaanan si cad ula hadlay Mikel iyo kooxdaba.
“Way fahmeen go’aankayga wayna ixtiraameen. Waanad ogtahay, in dabeecadda Arsenal ay tahay in marka aad wax walba u hurto inay ku ixtiraamayaan.”
axadle 5534 posts
Dhimashada & kororka Kiisas cusub ee Covid-19 oo…
37,508-Kiisas cusub & Dhimashada 866-ruux, Covid-19…
Mauricio Pochettino pays tribute to…
Ethiopia braces for election in the midst of COVID-19